အိုင်အက်စ် ဒေသခံခေါင်းဆောင် ၃ ဦး အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒက်မြို့အနီးတွင် သေဆုံး - Xinhua News Agency
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒက်မြို့ရှိ al-Sinak တံတားအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် စစ်သားများအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အီရတ်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Yahia Rasoul က ဘဂ္ဂဒက်မြို့ အနောက်တောင်ပိုင်း al-Radwaniyah ဒေသရှိ အိုင်အက်စ်တို့ ပုန်းခိုရာနေရာအား CTS တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် အစွန်းရောက်အဖွဲ့မှ ဒေသခံခေါင်းဆောင် ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသေဆုံးသွားသည့်သည့် အိုင်အက်စ်ဒေသခံခေါင်းဆောင် ၃ ဦးမှာ ဘဂ္ဂဒက်မြို့လယ် Bab al-Sharji ဒေသတွင်ရှိသော လူစည်ကားသည့် တစ်ပတ်ရစ်အဝတ်အထည်ဈေး၌ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အသေခံဗုံးခွဲမှုများတွင် အသေခံဗုံးခွဲခဲ့သူ နှစ်ဦးအား ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြောင်း Rasoul က ဆိုသည်။ ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုများတွင် စုစုပေါင်း ၃၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၁၆ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဘဂ္ဂဒက်မြို့ တောင်ပိုင်းတွင်လည်း အိုင်အက်စ်တို့ ပုန်းအောင်းလျက်ရှိသည့်နေရာအား ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အခြားအိုင်အက်စ်ဒေသခံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဖမ်းဆီးရမိသူထံမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံ၍ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် al-Yousifiyah ဒေသ၌ အိုင်အက်စ်တို့ပုန်းအောင်းနေသော နေရာတစ်ခုအား ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ဝှက်ထားသော လက်နက်များအား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း Rasoul ကဆိုသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် IS စစ်သွေးကြွများအား အပြည့်အ၀ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အီရတ်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် အိုင်အက်စ်အဖွဲ့အကြွင်းအကျန်များသည် မြို့ပြဒေသများ သို့မဟုတ် သဲကန္တာရ နှင့် ကျောက်ဆောင်ကျောက်ကမ်းပါးပေါများသောဒေသသို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ကာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် အရပ်သားများအား မကြာခဏပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် စစ်ဒဏ်ခံနေရသောတိုင်းပြည်တွင် သေစေလောက်သော အဖြစ်အပျက်များ ကြိုကြားကြိုကြား ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
3 IS local leaders killed near Iraq’s Baghdad: military
BAGHDAD, May6(Xinhua) — The Iraqi Counter-Terrorism Service (CTS) commandos killed three local leaders of the extremist Islamic State (IS) group near the Iraqi capital Baghdad, the Iraqi military said Thursday.
Yahia Rasoul, spokesman of the commander-in-chief of the Iraqi forces, said inastatement that the CTS forces attacked an IS hideout in the al-Radwaniyah area, southwest of Baghdad, leaving three local leaders of the extremist group killed.
Rasoul said that the killed IS local leaders were involved in helping the suicide bombers, who carried out twin suicide bombings on Jan. 21 inabustling outdoor market for second-hand clothes in the Bab al-Sharji area in downtown Baghdad. A total of 32 people were killed and 116 others were wounded in the blasts.
The commandos also raided an IS hideout in south of Baghdad and arrested another IS local leader, Rasoul said, adding that based on information extracted from the detainee, the troops destroyed an IS hideout and seizedacache of weapons in the al-Yousifiyah area.
The security situation in Iraq has been improving since Iraqi security forces fully defeated IS militants across the country late in 2017.
However, deadly incidents still occur sporadically in the war-ravaged country as IS remnants have since retreated into urban areas or deserts and rugged areas, waging frequent guerilla attacks against security forces and civilians. Enditem